अर्थमन्त्री खतिवडालाई राज्यद्रोहको मु’द्दा लाग्नसक्छ: भीम रावल – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
अर्थमन्त्री खतिवडालाई राज्यद्रोहको मु’द्दा लाग्नसक्छ: भीम रावल
काठमाडौं-नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटि सदस्य भिम रावलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर ठुलो राष्ट्रघात गरेको बताएका छन् । एमसीसी खारेज अभियानले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले एमसीसी कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडामाथि कडा प्रहार गरे ।
सोमबार अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजनाविरुद्ध आयोजित अर्चुअल अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएर नेता रावलले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
यसअघि समेत रावलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै एमसीसी विरुद्धको अडान प्रस्ट पारेका थिए । उनले स्पष्ट पार्दै भनेका थिए, ‘भीम रावलले एमसीसी अनुमोदन गर्न सहमति जनायो भन्ने समाचार गलत र दुराशयपूर्ण छ । एमसीसीबारे नेकपाको कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि नेकपाको हित र कानून विपरीतका सम्झौताका प्रावधान परिमार्जन र संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न मिल्ने भन्ने मेरो धारणा थियो र त्यसमा म कायम छु । प्रतिवेदनमा त्यही छ । यस्तो तथ्यलाई नबंग्याउन सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्छु । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमान विपरीत कसैसँग सम्झौता हुन सक्दैन । त्यस्तो कसैले गरे मानिँदैन ।’
यो खबर हिमाल पोष्ट बाट साभार गरिएको
Previous राहतको माग गर्दै प्रहरी प्रशासन कार्यालय घे’राउ,हेर्नुहोस!
Next चर्चित सञ्चारकर्मी Rabi Lamichhane लेख्नुहुन्छ:धर्म गर्न घर बाट निस्केको मान्छे पाप गरेर घर फ`र्कियो !कठै!!